ब्लगबाट यसरी गर्न सकिन्छ कमाइ « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
ब्लगबाट यसरी गर्न सकिन्छ कमाइ
१७ पुष २०७५, मंगलवार १२:३८ मा प्रकाशित
के तपाईं लेख्न रुचाउनुहुन्छ ? के तपाई आफ्नो लेखलाई घर बसी–बसी कमाउने माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ रु त्यो पनि लाखौंमा १ त्यसो भए आजैबाट लेख्न थाल्नुहोस् । अनलाइनका माध्यमबाट तपाईं आफ्नो लेखलाई नगदमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ ।
विज्ञापनदाता छान्ने तरिका ?
धेरै विज्ञापनदाताले ब्लग सपोर्ट नगरे यसो गर्नुहोस्
गीत : दिलको फूलबारी गोड्न चाहियो एउटा माली
कविता : कठै ! कस्तो देशको नागरिक म!
कविता : जनताका प्र म जनता सँगै लाइनमा
कविता : सम्झना बि पि को
कविता ” एक सय पैँसठ्ठी दाना फल”